Indlu enomtsalane kwiinduli ze-Umbrian (FF)
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMario
Kwindlu enkulu esihlala kuyo asidluli kwisibini esitshatileyo (NGAKHO ABANTWANA) kwizindlu ezintathu. Ngamnye unomnyango ozimeleyo kunye nendawo yangasese yangaphandle. Indlu isemaphandleni, iikhilomitha ezi-4. ukusuka eCittà della Pieve kunye neChiusi kwaye unikezela ngemibono enomdla kwiChibi leTrasimeno kunye neenduli zaseUmbrian. Le ndlu ikumgangatho wokuqala, inesitepisi esahlukileyo kunye ne-terrace, igumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Izinyuko zangaphakathi zinyuka ukuya kwigumbi elikhulu lokulala (16 sqm.)
Indlu iye yabuyiselwa ngezinto zemveli kunye nemvelaphi. Ifakwe ngezinto zakudala kunye nezinye ezithengiweyo kwihlabathi jikelele. Into nganye ikhethelwe thina kunye nabahlobo bethu abadla ngokusityelela.
Ikumgangatho wokuqala. Ngesitebhisi se-classic kunye nelitye (labucala) likhokelela kwi-terrace enetafile kunye nezihlalo ezigqunywe yintente ephuzi, ukusuka apha unokubukela imbono enhle yasemaphandleni, kwisixeko esidala saseChiusi kunye ne-Apennines. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokutya kunye nesidlo sakusasa, ukuphumla nokufunda okanye i-aperitif ekupheleni kweentsuku: ilanga litshona kanye ngaphambili.
Ukusuka kwibalcony ungena kwigumbi elikhulu elinendawo yokuhlala (isofa kunye nezinyuko), igumbi lokutyela (itafile enezitulo zabantu aba-4) kunye nekhitshi (evaliweyo kumnyango wokuqala).
Ikhitshi linefriji kunye nesipheki sombane esinemililo emibini. Ngaphandle koko kukho iketile yombane. Ekhabhathini kukho iimbiza, izitya kunye nezixhobo zokwanela abantu abane.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala ufikelela kwindawo yokuhlambela (umnyango, indawo encinci kunye nomnyango wesibini), ishawari inkulu kakhulu.
Izinyuko zomthi zikhokelela kwindawo ephezulu (16 mq.) eyigumbi lokulala. I-mezzanine ejonge kwigumbi lokuhlala kwaye inefestile ejonge emaphandleni. Ibhedi enomlinganiselo we-160x200. Kwigumbi kukho i-armchair kunye nesibuko esikhulu, i-closet kunye nethala leencwadi
Ngasebhedini, iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi, izibane zasebusuku zixhonywe eludongeni kwaye zenziwe ngobhedu (ezenziwe ngumhlobo wethu uTonino). Phezu kwebhedi kukho inethi yeengcongconi. Egumbini kukho ifeni.
I-bedhas cotton bedspread kunye (ngokwahlukileyo) i-quilt elula ukuba ubusuku bubanda.
Sinamalaphu etafile ahlukeneyo etafile yangaphakathi kunye nangaphandle.
Sikhumbuza iindwendwe zethu ukuba imigangatho inzima kakhulu ukuyicoca, ngoko ke ukuba i-possibil ayisetyenziswanga izihlangu endlwini kwaye sinikele ingqalelo kuyo yonke into enokuthi ingcolise.
Iitafile zokutya zenziwe ngamaplanga kwaye azithwali ukushisa okuthe ngqo: ngoko kufuneka uhlale ubeke into phantsi kweekomityi okanye phantsi kweembiza.
Le Ndlu imi emaphandleni kwindawo ezolileyo kodwa engeyodwa. Isikhululo sikaloliwe saseChiusi sikumgama oziikhilomitha ezi-4 Umgama ofanayo kukho iivenkile ezinkulu kunye neevenkile. Ngokwenene "sizimbindi we-Italy".
Usapho lwethu luhlala kwindawo eyahlukileyo yeNdlu. Uya kuhlala unemfihlo yakho. Ukuba unqwenela, siya kukuvuyela ukuncokola okanye ukukunika iingcebiso kunye nolwazi. Ukuba uyafuna sizokuphekela. Rhoqo kusasa siya kukuthengela isonka esifreshi.
Usapho lwethu luhlala kwindawo eyahlukileyo yeNdlu. Uya kuhlala unemfihlo yakho. Ukuba unqwenela, siya kukuvuyela ukuncokola okanye ukukunika iingcebiso kunye nolwazi. Ukuba uyafun…